Wararka Maanta: Jimco, Feb 1 , 2013-Ciidamada Maamulka Gobolka Hiiraan, kuwa AMISOM iyo Al-shabaab oo xalay ku dagaalamay Magaalada Baladweyne
Dagaalka ayaa bilaawday kadib markii xogagg ka tirsan Al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisimo dulleedka xaafadda Howl-wadaag ee magaalada Baladweyne ku lahaayeen ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka Ciidamada Midowgga Africa AMISOM iyo saldhig ciidamada maamulka gobollka Hiiraan ay ka joogeen Buundada Liiqliiqato ee isku xirta xaafadda Howl-wadaag iyo xaafadaha kale ee magaalada.
Dhinacyada dirirtu dhax martay ayaa isku adeegsaday hub-ka noocayadiisa kala duwan waxaana la maqlayay madaafiic laga soo tuurayay qoriga hoobiyaha, hubka laga rido gadiidka dagaalka, iyo rasaasta qoryaha daran-dooriga u dhaca kuwaasoo qal-qal ku abuuray dadka rayidka ah ee magaalada gaar ahaan xafaada lagu dagaallamay ee Howl-wadaag.
‘’Xalay waxaa soo weeraray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka iyo kuwa Jabuuti ee howlgalka midowgga Africa AMISOM kooxaha cadawga, waxaana la gaarsiiyay jab xoog leh, xiliganna waxaa lagu raad joogaa firxadkii ka haray,’’ ayuu yiri Col Towane Axmed Gurey.
Mar wax laga weydiiyay waxaa uu ka og-yahay khasaaraha ka dhashay dagaallkii xalay, waxaa uu sheegay in uu arkay tiro meydad ah oo ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday, isaga oo intaa ku daray in dhinacooda uu dagaallka kaga dhaawacmeen labo askari oo kaliya.
Ma jiro wax war ah oo ay Al-shabaab ka soo saareen dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobollka Hiiraan.
Rasaasta iyo madaafiicda leysku adeegsanayay dagaallkii xalay ayaa si toos ah ugu dhacayay xaafaddo ay ku nool yihiin dad shacab ah, waxaana ilaa iyo hadda inta la og-yahay ku dhaawacantay ilaa Afar ruux oo rayid ah.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Baladweyne oo ahaa mid aad u culus ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo dhaxmara ciidamada Jabuuti ee howlgalka AMISOM iyo Al-shabaab tan iyo markii ay soo gaareen magaalada horaantii sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2012-ka.
Xaaladda guud ee magaalada ayaa saakay degan, waxaana caadi u soconaya dhaq dhaqaaqa dadka, gadiidka iyo ganacsiga intaba, inkastoo dadweynuhu ay hadal hayaan dagaallkii xalay.